Yakakurudzira odhiyo dzidziso pasi peGNU / Linux | Kubva kuLinux
Yakakurudzira odhiyo dzidziso pasi peGNU / Linux
Usati waenderera mberi neakasiyana emahara emahara emagetsi ekugadzira maturusi, ndinofunga zvakakosha kuisa kwachako nhevedzano yezvinyorwa zvatiri kunyora kubva kuHisppasonic. Chinangwa cheizvi ndechekudzivisa kudzokorora zvirimo zvinopfuura zviripo mu "network" uye ruzivo rwavo rungangodaro rwakakosha kana kushomeka zvichienderana nezvinodiwa. Kubva pano, ini ndichaedza kutarisa kushandiswa kwekushandisa kwezvirongwa izvi, zvakadaro kudzivisa kuve kwakanyanyisa uye hongu zvakajairika, nekuti hapana mumwe wedu ari nyanzvi pachinhu ichi. Saizvozvowo, apo isu patinounganidza mamwe manyowani, ichave nguva yekuzvinyorazve.
1 Sisitimu Zvirongwa uye JACK Audio Kubatanidza Kit
Sisitimu Zvirongwa uye JACK Audio Kubatanidza Kit
Yangu yekutanga GNU Audio yekupinda muUsemosLinux anga achiitirwa kugadzirira generic system uye kutsvaga mashoma akanaka e distros ayo ekuchengetedza iwe iwo ekutanga matanho. Izvo zvakakosha kuti uzive zvinoitika mune yedu "yakaderera latency" system (yeizvi isu takatanga kutamba neLinux, handiti?). Kunyangwe neazvino vhezheni dzenzvimbo iko kushandiswa kweiyo chaiyo kernel isisakoshe, kuchine vanhu vanozvifarira. Kune izvi zvese, iyo Argentine SounDebian webhusaiti inofanirwa kuve iripo mumabhukumaki ako. Kunze kwezvo, inosanganisira yakanaka chikamu chemanyowani.
Chinja Ubuntu 12.10 kuita Multimedia yekunyora distro
Chikamu chakanyanya kunetsa cheichi chiitiko chekugadzira mimhanzi pasi peLinux chiri kujaira kushandisa JACK. Pano iwe unofanirwa "kusunga madhiri" uye kurasikirwa nekutya kwako. Izvo zvinokwanisika kuti isu tinomhanyisa mumatambudziko anodarika rimwe, asi chiitiko changu chinondiudza kuti vazhinji vevashandisi vanopenga kuti vazvigadzire ndevekuti "havana kuverenga mirairo nenzira kwayo".
IZVO ZVINOKOSHA kuti unzwisise kushoma kwekushanda kwayo (kunyangwe zvichibatsira kusarudza yakayedzwa-zvakanaka odhiyo Hardware pasi peLinux, inopfuura imwe inoishandisa pasina dambudziko nemakadhi akabatanidzwa). Kudzokera pane zvakaitika kwandiri, maSemicorchux tutorials (Pablo_F muHispasonic) ndiwo akanakisa, uye anogara aripo kupindura mibvunzo uye kutibatsira nekugadzirisa mune aya maforamu.
Chekupedzisira, muzuva rayo ndakadudzira chinyorwa kubva kuAvLinux bhuku rinopfupisa mashandiro eJack kwechitsva.
JACK 1/2 kumisikidzwa
JACK 2/2 kumisikidzwa
Nhanganyaya kuJACK Audio Kubatanidza Kit
Ardor ndiye "musikana akanaka" weGPL odhiyo software, uye zvimwe kubvira pakauya vhezheni 3. Imwe sarudzo ingori inoshanda (kunyange iri nyore uye iine "alpha" hunhu) iQtractor. Kushanda naArdor tichava nezvakawanda zvatinoda zvasangana.
Parizvino pane akazara emanyowani eiyo vhezheni 2.8 (muChirungu neSpanish, ese ari maviri ari paSounDebian), iyo inowedzerwa kwechinguvana vhezheni yeArdor3 bhuku, parizvino riri muChirungu chete. Kunyanya kutaurwa kweiyo nyowani Chinyorwa chepamhepo inowanika pawebsite yavo.
Asi zvirokwazvo, ini ndatoziva vashandisi, uye hausati uchida kuzvirongedza nemapeji mazana maviri emabhuku, saka unofanirwa kupa chimwe chinhu chakareruka. Zvakanaka, isu tine mhanza, nekuti YouTube iripo. Sezvo isu tichienderana neshanduro yechitatu, tinogona kuzvizivisa kuArdor nemavhidhiyo e Andriu (zvakare mushandisi weHisppasonic) uye Radialistas.
Kupedza (nekuti zvikasadaro mukana uyu uchave muhombe ...), ini ndichataura zvimwe zvakanyatsotsanangurwa zvinyorwa:
Irwin Cespedes (Altiplane) anotsanangura maitiro ekugadzira a SideChain kudzvinyirira naArdor3.
Kana nzeve ikasapa zvakanyanya, kushandisa spectrum analyzer kunogona kubatsira, uye kune izvo zvatiinazvo Mhuru Yekuongorora.
Ini handisi nyanzvi yezvigadzirwa, asi pano iwe wakurudzira zvinyorwa (muChirungu) nezve Seq24 y KwakachenaData.
Pakupedzisira, chinyorwa changu «Kugadzira yedu yekutanga Gitare kurira neGuitarix», iyo yakava chikamu cheiyo chirongwa Wiki.
Kune zvimwe, asi iyo imwe nyaya ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Yakakurudzira odhiyo dzidziso pasi peGNU / Linux
Roy batty akadaro
Pindura Roy Batty
Kugadzirisa x264 vhidhiyo neAvidemux.